Umaki: isu lokumaketha lokuzenzekelayo | Martech Zone
Umaki: isu lokumaketha lokuzenzekelayo
Usebenzisa kanjani isu eliyimpumelelo lokumaketha? Kumabhizinisi amaningi, lona ngumbuzo wedola wesigidi (noma ngaphezulu). Futhi ngumbuzo omuhle kakhulu okufanele ubuzwe. Kodwa-ke, okokuqala kufanele ubuze, yini ebeka isu lecebo lokuzenzekelayo lokumaketha? Liyini isu Lokuphumelela Lokumaketha? Kuqala ngomgomo noma ngeqoqo lezinjongo. Kunezinhloso ezimbalwa ezisemqoka ezikusiza ukuthi ulinganise ngokucacile ukusetshenziswa okuyimpumelelo kokuzenzakalela kokumaketha. Kubandakanya:
Sibhale ngokuningiliziwe ngamasu wokuzenzekelayo wokumaketha, yiziphi izici ezibucayi, nezinselelo zokwenza lawo masu wokushayela umkhondo. Umgomo wokumaketha okuzenzakalelayo ukuvala igebe elibucayi phakathi kokuthengisa nokumaketha, ekugcineni ukushayela okukhulu kuholele emnyangweni wezentengiso ngesikhathi esifanele. Lokhu kusiza ukuthuthukisa ikhwalithi yokuhola futhi kunciphise umzamo odingekayo wokuvala ukuthengiswa. Ekugcineni lokhu kukhulisa inani lokuhola, inani